विद्यालयमा बिधिकाे शासन कायम गर्न अभिभावककाे लिखित दवाव
कपिलवस्तु, चैत्र, ६ गते
कपिलवस्तुको महारजगंज नगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको पियुषराज निमावीका अभिभावकले राजनितिक हस्तक्षेपमा गरिएको व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् ।
केहि राजनितिक व्यक्ति र गैर अभिभावकको भेला गराई सर्वसम्मतको नाममा गरिएको समिति गठन गैरकानूनी भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । विद्यालयमा रहेका ५२ प्रतिशत अभिभावकले आइतबार संयुक्त हस्ताक्षर गरि विद्यालयमा सर्वसम्मतको नाममा जथाभावी व्यक्तिलाई विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
यस संगै केहि दिन अधि सर्वसम्मत रुपमा गरिएको भनिएको व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया विवादित बन्न पुगेको छ । राजनीतिक सहमतिको नाममा जुनसुकै व्यक्तिलाई विद्यालयको जिम्मा दिन नसक्ने भन्दै विद्यालयलाई राजनिति गर्ने थलो नबनाउने अभिभावकहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको दबाबमा निर्वाचन प्रक्रिया वा बहुमतिय प्रक्रिया भन्दा पनि कोठे राजनितिक सहमतिमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको श्रोतको दाबी छ । फागुन ३० गते विद्यालय प्रशासन र राजनितिक दलका साथै जनप्रतिनिधिले सर्वसम्मतको नाममा समिति गठन गरेको स्थानीय अविभावक राम लखन यादवको आरोप छ । विद्यालयमा ६५ जना अभिभावकहरुले हस्ताक्षर गरी निवेदन दिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अयोध्या प्रसाद वरइले बताउनुभयो । “अभिभावकले मान्दैनौ भनि निवेदन दिएका छन् , बहुमत अभिभावकले निवेदन दिए पछि मैले पनि मान्नु पर्याे” प्रधानअध्यापक वरइले बताए ।
विद्यालयमा कुल अभिभावक संख्या ११० जना रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष विजय जैयसवालले जानकारी दिए । ११० जना मध्ये ६५ जनाले सर्वसहमतीबाट आएका पदाधीकारीलाई मान्दैनो भनेका छन् उहाले भन्नुभयो । “भेलामा गैर अभिभावकको पनि उपस्थिती गराई सर्व सम्मतीबाट पदाधीकारी चयन भन्ने भ्रामक प्रचार गरियो” अभिभावक राम लखन यादवले बताए। अभिभावकहरुले सर्वसम्मतका नाममा गरिएको समिति खारेज गरि प्रक्रिया अनुसार समिति गठन गर्न र नगरे विद्यालय विरुद्ध प्रशासन र अदालत जाने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद आए पछि र अभिभावकहरुको निवेदन परेपछी नयाँ पदाधीकारीलाई बैठक बस्न नदिएको प्र.अ. वरइले जानकारी दिए । विद्यालयका प्र.अ. ले पनि ३० गते भएको अभिभावक भेलामा गैर अभिभावकहरुको उपस्थिती रजिष्टरमा भएको स्वीकार गरेका छन् । सर्वसम्मत गर्ने भनेपछि आफुले पनि सामान्य रुपमा लिएको तर अहिले विवाद भएपछि समस्या आएको उनकाे भनाइ छ ।
विद्यालय रहेको वडाका अध्यक्ष नैनदास मुराउले भने अभिभावकहरुको भेला सर्वसम्मतीबाट समिति सदस्यहरु चयन भएको बताएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न शिक्षा ऐन २०३८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९को आठौं संसोधन अनुसार अभिभावकहरु मध्येबाट २ महिला सहित ४ जना सदस्यहरु छनौट हुनु पर्ने र सोही छनौट भएका ४ जनाले २ जनालाई मनोनित गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सर्वसम्मत रुपमा समिति छनौट गर्न सकिने तर बहुसख्यक अभिभावकले विरोध जनाए प्रक्रियामा गई समिति गठन गर्नुपर्ने शिक्षा समन्वय ईकाई कपिलवस्तुले जनाएको छ ।